बैंकिंग Archives - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
प्रदेश ५ मा लक्ष्मी बैंकका थप २ शाखा विस्तार
७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०२:४२ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ७ जेठ । लक्ष्मी बैंकले प्रदेश ५ मा थप दुई वटा शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । बर्दियाको गुलेरिया र दाङको तुल्सीपुरमा बैंकले शाखा कार्यालय विस्तार गरेको हो । यी शाखा विस्तार भएसँगै प्रदेश ५ मा बैंकको शाखा संख्या १२ पुगेको बैंकले जनाएको छ । उक्त शाखाहरु मार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न […]
एनसीसीको शाखा दैलेखको ठाँटीकाँधमा
७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०१:०० अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ७ जेठ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको हो । यो शाखा ठाँटीकाँध र आसपासका क्षेत्रमा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । उक्त शाखाबाट एनसीसी बैंकले प्रवाहगर्ने सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु सरल […]
७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ००:४४ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ७ जेठ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र ह्याम्स अस्पतालबीच स्वास्थ्य उपचारमा छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । धुम्बाराही स्थित ह्याम्स अस्पतालमा बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई उपचारमा छुट दिन सम्झौता भएको हो । संझौतापत्रमा ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष आर.एस. भण्डारी र बैंकका ट्रान्जेक्सन बैंकिङ्ग प्रमुख पुकार सुबेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहक तथा […]
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरुलाई एभरेष्ट अस्पतालमा उपचार गर्दा विशेष छुट
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०३:५४ अर्थकोअर्थ
काठमाडौं, ६ जेठ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुलाई एभरेष्ट अस्पताल प्रा.लि.,काठमाडौंमा विशेष छुट हुने भएको छ । बैंकका डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड वाहक तथा बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई एभरेष्ट अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५ प्रतिशत देखि १० प्रतिशतसम्मको छुट हुने भएको हो । बैंकका ग्राहकहरुलाई सहुलियत उपचार सेवा दिने सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत […]